मतदाताले उम्मेदवारसंग के भन्छन् होला? - भिडियो - कान्तिपुर समाचार
मतदाताले उम्मेदवारसंग के भन्छन् होला?
काठमाडौं — स्थानीय चुनाव नजिकिंदै गर्दा उम्मेदवारहरु आ–आफ्न क्षेत्रमा चुनावी प्रचार गर्न खटिएका छन् । तर, मतदाताहरु के सोच्दा हुन् ? हामीले सिन्धुपल्चोक र दोलखाका केही मतदातासंग उम्मेदवारसंग तपाईले भन्ने गर्नु भएको छ भनेर सोधेका थियौं । मतदाताको आवाज:
प्रकाशित : वैशाख २४, २०७४ १२:०९
काठमाडौं — संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ ।दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक जेठ ४ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित भएको हो ।
संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ ।
दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक जेठ ४ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव टेबुल गर्न विपक्षी दलहरुले नदिएपछि शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको थियो ।